फागुन ०८, २०७५ बिगुल
ललितपुर – बलात्कारको अर्थ हो जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्नु । दोस्रो पक्षको मञ्जुरीबिना नै जोरजबरजस्ती वा ललाईफकाई यौन सम्पर्क स्थापित गर्नु नै बलात्कार हो । बल प्रयोग गरेर वा कब्जामा लिएर, डर धाक देखाएर आफ्नो यौन सन्तुष्टिका लागि वा कानुनी रूपमा उमेर नपुगेका बालिकाहरूसँग उनीहरूकै मञ्जुरीमा गरिने यौन सम्पर्क बलात्कार हो । बलात्कार परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । जब मानिसमा यौन इच्छा जाग्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा मानिस बलात्कार गर्न पुग्छ । आफ्नो मनमा आएको इच्छालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेकैले गर्दा बलात्कार गर्नेलाई पशुवत व्यवहार भन्ने गरिएको छ । यौन सम्पर्क सृष्टिको अनिवार्य तत्व हुँदाहुँदै पनि मानिसले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर नै उ मानिस भएको हो । नत्र भने पशु र मानिसमा के नै फरक भयो र ?
ललितपुरमा गत वर्षको तुलनामा बलात्कारका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्ष नौ जना बलात्कारका घटनामा पीडित भएकामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सन् २०१८ मा ३५ जना बलात्कारका घटनामा पीडित भएका छन् । सन् २०१७ मा बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौन दुव्र्यवहारबाट १३ जना पीडित भएकामा सन् २०१८ मा त्यस्ता घटनाबाट ४५ जना पीडित भएका तथ्याङ्क इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समाविष्ट गरेको छ । इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा मानव अधिकार उल्ल्ङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यतथ्याङ्कलाई समेट्ने गरेको छ ।
सन् २०१७ र २०१८ मा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार घटनाका तथ्याङ्क :
सन् २०१७ र २०१८ मा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार घटनाका तथ्याङ्क
२०१७ २०१८ जम्मा
बालिका बलात्कार ४ २३ २७
महिला बलात्कार ५ १२ १७
महिला यौन दुर्वव्यहार ० ४ ४
बालिका यौन दुर्वव्यहार ४ ६ १०
जम्मा १३ ४५ ५८
“महिला हिंसा र बलात्कारको चर्चा समाचारमा आउन थालेपछि पीडा लुकाएर बसेकाहरूले पनि बिस्तारै आफ्ना समस्याहरू बाहिर ल्याउन थालेका छन् । प्रहरीमा उजुरी दिन आउन थालेका छन्”, इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले भने । उनले भने –“बलात्कार भएपनि पीडितले गाउँमै मिलापत्र गर्दै आएका घटनाहरू पनि ललितपुरमा विद्यमान छन् । तर, अहिले उनीहरूले प्रहरीकहाँ उजुरी दिन थालेका छन् ।” घटनाहरू बढेको भन्दा पनि रिपोर्टिङ बढेको तिमल्सिनाको बुझाइ छ ।
बलात्कार सामाजिक, नैतिक तथा कानुनी रूरुपमा अपराध हो । बालिकासँग सहमतिमा गरिएको यौन सम्पर्क पनि अपराध हुन्छ भने महिलासँग बलात गरिएको यौनसम्बन्ध अपराध मानिन्छ । पछिल्लोे समय बढ्दै आएको बलात्कारका घटनाहरूलाई न्यूनिकरण गर्न आम मानिसमा सचेतना हुनु आवश्यक छ । बलात्कारको प्रकृति हेरेर बलात्कारीलाई जेलसजायको दण्ड दिइन्छ तर, उनीहरूलाई समाजमा बहिष्कार गर्ने प्रचलन भने प्रायः छैन । समाजले त बलात्कारीलाई भन्दा बलात्कृतलाई हेयको दृष्टिबाट हेर्ने गरेको कारण पनि यस्ता घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको हुनुपर्छ । आम नागरिकहरूमा नागरिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा यौन शिक्षाका साथै बलात्कारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सके बलात्कारका घटनाहरूमा कमी आउन सक्ला कि !
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०८, २०७५१४:५४
आज दिउँसो मात्रै भ्यानसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा श्रवणकुमारको मृत्यु !
प्रहरि लगायत अन्य क्षेत्रमा हुने भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्छाै : गृहमन्त्री थापा
ढुंगाले च्यापेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् घाइते
कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा थप छ आकाशे पुल बन्ने ! कहाँ-कहाँ बन्दैछ ?
एसपी विष्टले बयानको क्रममा आफ्नो गल्ति यसरी स्वीकार गरे !
मेसीको दुई गोलमा बार्सिलोना विजयी ! यसरी गरे मेसीले गोल ! [भिडियो सहित]